Tsy nisy tsunami taorian'ny horohoron-tany 6.80 tany Chile
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tsy nisy tsunami taorian'ny horohoron-tany 6.80 tany Chile
Ny fampandrenesana momba ny horohoron-tany amerikana ofisialy dia nampitandrina ny amin'ny tsunami mety hitranga any amin'ny faritra. Io fampitandremana io dia nofoanana taty aoriana taorian'ny horohoron-tany mahery 6.8 namely 223 km N ny Coquimbo
Coquimbo dia tanàna misy seranana, kaominina ary renivohitry ny Faritany Elqui, miorina amin'ny làlambe Pan-American, ao amin'ny Faritra Coquimbo any Chili. Coquimbo dia miorina eo amin'ny lohasaha 10 km atsimon'ny La Serena, izay mamorona Greater La Serena miaraka amin'ireo mponina maherin'ny 400,000.
Tsy misy tatitra momba ny fahasimbana na ratra lehibe. Nihorakoraka ny tany Chili taorian'ny horohoron-tany tany an-toerana.
IATA: Misokatra indray ny sisin-tany, manohy ny fepetra fanampiana ny zotram-piaramanidina
Hawaii Airlines dia manapaka asa 1,000 XNUMX